फेसबुकले सम्मानजनक र खुला संवाद नष्ट गरेको छ ... र मैले सम्पन्न | Martech Zone
मङ्गलबार, जुन 2, 2020 मङ्गलबार, जुन 2, 2020 Douglas Karr
यो हाम्रो देश को लागी केहि महीनाहरु भएको छ। चुनाव, COVID-१, र जर्ज फ्लोडको भयानक हत्याले हाम्रो देश शाब्दिक रूपमा घुँडा टेकेको छ।
म कसैलाई पनि विश्वास गर्न चाहँदैनु यो एक बू-हू लेख हो। यदि हामीले सँगै अनलाइन झगडा गर्ने आनन्द प्राप्त गर्यौं भने, तपाईंलाई थाहा छ कि मैले यसलाई रगतको खेल जस्तो व्यवहार गरें। धर्म र राजनैतिक झुकावले गर्दा छुट्टिएको घरमा बस्नको कलिलो उमेरदेखि नै मैले अनुसन्धान गर्ने, सुरक्षा गर्ने र आफ्नो विश्वास तथा भावनाहरूको बहस गर्ने तरिका सिकेकी छु। मलाई त्यहाँ टस to्ग ग्रेनेड र केही जिंगर मन पर्थ्यो।
जहाँ राजनीति जहिले पनि अफलाइनमा वा अफलाइनमा आदरपूर्ण कुराकानीको लागि फिसस्ने ढाँचा भएको छ, म सधैं आफैं दुबै बाध्य महसुस गर्दछु र मेरा विचारहरू अनलाइन साझेदारी गर्न पनि प्रोत्साहित गर्दछु। म भ्रममा थिएँ जुन मैले सहयोग गरिरहेको छु।
मैले सधैं सोचे सामाजिक संजाल मसँग असहमत भएको व्यक्तिहरूसँग खुला कुराकानी गर्न सुरक्षित ठाउँ थियो। जबकि ट्विटर स्थान हो जहाँ म तथ्य वा विचार साझा गर्न सक्थें, फेसबुक मेरो मनपर्ने इच्छाको लागि घर थियो। म मानिसहरूलाई माया गर्छु र म हाम्रो भिन्नता बाट मोहित छु। म राजनीति, चिकित्सा, प्रविधि, धर्म, वा कुनै अन्य विषयमा छलफल गर्ने अवसरलाई हटाएँ ताकि म अरूलाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्दछु, आफ्नै विश्वासहरूमा प्रश्न गर्न सक्छु, र आफ्नो तर्क साझा गर्न सक्छु।
मेरो देशको विशाल बहुमतले उस्तै चीजहरूमा विश्वास गर्दछ - जातीय र लै gender्गिक समानता, आर्थिक अवसर, गुणस्तरमा पहुँच, सस्तो स्वास्थ्य सेवा, कम गोलीबारी, युद्धको अन्त्य ... केहि थोरै नाम। यदि तपाईं अर्को देशबाट समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि यो सायद मिडिया प्रोफाइल होईन… तर यो हो is सत्य।
हो, हामी ती लक्ष्यहरू कसरी हासिल गर्छौं भन्नेमा हामी धेरै फरक हुन्छौं, तर तिनीहरू अझै समान लक्ष्यहरू हुन्। म तपाईंलाई आश्वसन दिन्छु कि म कुनै साथीलाई पेय पदार्थ लिन, कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न सक्छु, र तपाईं दुबै समानुभूतिशील, अनुकम्पापूर्ण र आदरणीय भएको पाउनुहुनेछ।
फेसबुकमा त्यस्तो छैन।
पछिल्ला केही महिनाहरूमा मैले धेरै विचारहरू र केही विचारहरू साझेदारी गरे ... र प्रतिक्रिया मैले सोचेको जस्तो थिएन।
मैले मेरो शहरमा कसैको दुखद हत्या साझा गरे र मेरो आफ्नै कथामा उनको हत्या प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो।
मैले अहिंसा प्रचार गरेँ र व्हाइटस्प्लेनर र एक नस्लवादी.
मैले मेरा साथीहरूबाट चोट पुर्‍याएको कथाहरू साझा गरे लकडाउन र भनियो म अरूलाई मार्न चाहान्छु।
मैले लै gender्गिक समानताका बारेमा आफ्ना विचारहरू साझा गरे र एक भनिन्थ्यो mansplainer एक सहकर्मी द्वारा म सम्मान र मेरो शहर मा पदोन्नति।
यदि वर्तमान प्रशासनले मैले केहि सराहना गरेको - जस्तो कि जेल सुधार पार गर्दै - मलाई म्यागा अनुयायी भएकोमा आक्रमण गरियो। यदि मैले विभाजनकारी केहि गर्नका लागि प्रशासनको आलोचना गरे - म एक कट्टरपन्थी Lefty भएको कारण आक्रमण गरियो।
दायाँमा मेरा साथीहरूले मेरो साथीहरूलाई बायाँ तिर आक्रमण गर्दछन्। बाँयामा मेरा साथीहरूले मेरो साथीहरूलाई दायाँ तिर आक्रमण गर्छन्। मेरा ईसाई मित्रहरूले मेरो समलि .्गी साथीहरूलाई आक्रमण गर्छन्। मेरा नास्तिक मित्रहरूले मेरा इसाई साथीहरूलाई आक्रमण गर्छन्। मेरो कर्मचारी साथीहरु मेरो व्यापार मालिक को साथीहरु मा हमला। मेरो व्यवसाय मालिक साथीहरूले मेरो कर्मचारी साथीहरूमा हमला गर्छन्।
यदि मैले उनीहरूलाई एक अर्कालाई आक्रमण गर्न रोक्न भनेँ, तब म एक समर्थन नगरेको आरोप लगाइएको थियो खुल्ला संवाद। सबैजनाले सार्वजनिक रूपमा मलाई आक्रमण गर्दै घरमा ठ्याक्कै महसुस गरे। निजी मा, यो पनि आयो। मेरो सन्देशवाहक सन्देशहरू भरिएको छ जुन मैले कसरी लिन सक्छ भनेर मांग गर्दै अन्य व्यक्तिको पक्ष। मैले घनिष्ठ मित्रहरूबाट फोन कलको एक जोडी पनि पाएँ जहाँ उनीहरूले मलाई चिच्याईरहेका थिए।
यती धेरै वर्ष सोशल मिडियालाई माया गरेर र फेसबुकमा खुला वार्तालाप पछि, मैले सकें। फेसबुक खुला कुराकानीको लागि ठाउँ होइन। यो एक स्थान हो जहाँ भीड र एल्गोरिदमले तपाईंलाई कडा मिल्काउँछ र तपाईंलाई पन्छार्न कडा परिश्रम गर्दछ।
फेसबुक एक स्थान हो जहाँ तपाईं बेरेरेट, अनफ्रेन्ड गरिएको, आरोपित, cussed, नाम-भनिन्छ, र तिरस्कारको साथ व्यवहार गरिएको छ। फेसबुकमा धेरै व्यक्तिहरू सम्मानजनक भिन्नताहरू चाहँदैनन्, उनीहरू कुनै पनि भिन्नतालाई घृणा गर्छन्। व्यक्तिहरू केहि पनि सिक्न चाहँदैनन् वा नयाँ विचारहरूमा आउँदैनन्, तिनीहरू अरूलाई घृणा गर्न बढि कारणहरू खोज्न चाहन्छन् जब तिनीहरू तपाईंबाट बिभिन्न तरिकाले सोच्छन्। र तिनीहरू पूर्ण रूपमा एल्गोरिदमहरू माया गर्छन् जुन क्रोधलाई दोभाई दिन्छ।
तीतो अपमान र क्रोध पछाडि नाम बोलाउने र अनादर गर्न लायक छैन। व्यक्तिले तपाईसँग व्यक्तिगत रूपमा कहिले बोल्दैन जुन तिनीहरूले तपाईसँग अनलाइन बोल्छन्।
यो अक्सर मलाई हेनकेनले गरेको विश्व अपार्टमेन्ट अभियानको सम्झना गराउँछ। जब बिल्कुल बिभिन्न संसारका मानिसहरु सँगै बस्छन्, तिनीहरूले एक अर्कालाई आदर, अनुकम्पा, र समानुभूति देखाउँछन्।
सामाजिक मिडिया मा त्यसो होईन। र विशेष गरी फेसबुकमा। मलाई डर छ कि फेसबुकको एल्गोरिदमहरू वास्तवमा डिभिजन ड्राइभ छ र खुला, सम्मानजनक कुराकानीमा मद्दत गर्दैन। फेसबुक प्याक ग्लेडिटर रिंगको बराबर हो, यसमा केही बियरहरूको साथ बार छैन।
फेरि, म निर्दोष छैन। मैले आफ्नो रिस गुमाएकोमा धेरै चोटि माफी मागेको छु
म थाकेको छु। मलाई पुग्यो। भीड जित्यो।
फेसबुकमा, म अब सबैको जस्तै मौन अवलोकनकर्ता हुनेछु, सावधानीपूर्वक क्युरेट गर्दै र साझेदारी नगर्ने सामग्रीहरू कुनै पनि मेरो विश्वासमा अन्तरदृष्टि। म मेरो कुकुर, एक स्वादिष्ट प्लेट, एक नयाँ बौर्न, र शहर मा केहि रातहरु को तस्वीरहरु साझा गर्दछु। तर यहाँबाट बाहिर, म मेरो दुई सेन्ट थपेको छैन, मेरो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दै छ, वा कुनै पनि विवादास्पदको बारेमा विचार साझा गर्दैछु। यो धेरै पीडादायी छ।
ठीक छ, यो उत्कृष्ट छ ... तर यसले तपाईंको कम्पनी र मार्केटिंगसँग के गर्नुपर्दछ?
मेरो उद्योग मा धेरै मान्छेहरु छन् कि व्यवसाय को लागी कल गर्दै छन् अझ बढी एक समग्र विपणन रणनीति को एक हिस्सा को रूप मा तिनीहरूको विश्वास र परोपकारी पहलहरु को बारे मा पारदर्शी। विश्वास यो छ कि उपभोक्ताहरू कम्पनीहरूले उनीहरूको समर्थनमा पारदर्शी हुनको लागि माग गरिरहेका छन्, यो विवादास्पद भए पनि।
जब म ती व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दछु, म आदरसाथ यस कुरामा उनीहरूसँग असहमत छु। वास्तवमा, म स्पष्टसँग भन्न सक्छु कि यो मेरो कम्तिमा पनि एक ग्राहक हो जसले मेरो राय अनलाइन पढ्दछ। जबकि मैले प्रदान गरेको सेवाहरूले यो सहकर्मीको धेरै व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरे, उनले केहि मुद्दामा उठाए जुन मैले अनलाइन भन्दै थिएँ र फेरि मेरो सेवाहरू कहिले अनुरोध गरेन।
जब सम्म तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईंको लक्षित श्रोता हडबड हो र तपाईं सहमत नहुनेहरूको आक्रमणबाट बच्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई हर हालतमा टाढा रहन्छु। व्यक्ति खुला संवाद अनलाइन चाहँदैनन्, विशेष गरी फेसबुकमा।
यदि तपाईंको दर्शकहरू भीड छैन भने, तिनीहरू पनि तपाईंको कम्पनीको लागि आउँदैछन्।
टैग: विवादफेसबुकजर्ज फ्लाइडलकडाउन